Soo -saaraha Shiinaha Midabada Midabka leh Faruuraha Dibnaha dhalaalaya Calaamadda Gaarka ah ee Dhaldhalaalaysa Dhabarka Dhabarka dhalaalaya Quruxda Qurxinta Qurxinta Lipstick warshad iyo soo -saareyaasha | Weiti
Soo -saaraha Midabada dhalaalaya Dibnaha dhalaalaya Calaamadda Gaarka ah ee Glitter Dhaldhalaalaysa Faruuraha Quruxsan Qurxinta Quruxda Quruxda
1.Qiimo tartame oo tayo sare leh
2.xoogga weyn ee dhalaalka dibnaha la isku qurxiyo waa wax la aqbali karo
3.Logo waxaa loo daabici karaa codsiga macmiilka
4. Midab -badan, xitaa midab iyo midab buuxa, shaqsiyad, la qaadan karo.
5. Biyo -la'aan iyo muddo dheer
6. Ku habboon in la qaado oo la kaydiyo
7.ka iibiyaha ugu fiican Suuqa Yurub & Ameerika
Way jilicsan tahay, siman tahay oo ololaysaa, si tartiib ah ayaad ugu masaxaysaa bushimaha, waxay midabayn doontaa dibnahaaga qoyan iyo soo jiidashada dhalaalka satin gloss gloss. Burushka faruuryaha ayaa lagu kala soocay labalaab wanaagsan, oo ka caafimaad badan oo ku habboon. Weligaa ma dhex -dhexaadin doontid oo waxaad ku iftiimin doontaa xiisaha galmo leh ee dhalaalaya dibnaha dhalaalaya.
Qurxintii ugu dambaysay ee dibinta: lipstick dareere ah oo aan la barbar dhigin
Qaaciddada khafiifka ahi waxay ku dul-dul-dhacdaa lakab khafiif ah oo midab ah, oo marka loo dhigo matte, dhammaystir la'aan ah oo leh awood joogitaan oo yaab leh, midabka ayaa kor loo qaadaa.
Midabada lama huraanka ah waa la gashan karaa keligood ama waa la isku dari karaa si loo abuuro midabka ugu habboon munaasabad kasta.
Isticmaal wareegyada dibnaha oo dhammaystiran si aad u dhammaystirto muuqaalkaaga.
Waxaan leenahay warshad noo gaar ah, oo jumlada dhaldhalaalka jumlada, dhalo dibinta, lipstick, qalin suni, suni, qalin sunneed, saxaarad hooska indhaha, saxarka wejiga, qarsoon, saxaarad budo, sanduuqa qurxinta, isbuunyada qurxinta, baakadaha hooska isha, sanduuqa hooska isha oo leh weel saxarka qurxinta muraayadda, Noocyada qurxinta sida buraashyada qurxinta, indhashareerka, maroojiyaha indhaha, maroojiyaha wejiga, iwm.
1.Waxaan nahay soo saare xirfadle ah
2.Qiimo hoose oo tayo sare leh
Adeegga 4.OEM iyo astaanta macmiilka waa mid la aqbali karo
5.Waxaannu sidoo kale u habaynaynaa shaybaarkaaga ama sawirradaada.
6.Ka sokow shaygan, wali waxaad leedahay qaabab kala duwan
7.waxaan leenahay kooxdayada R&D iyo kooxda kormeerka tayada
Bandhigga saamaynta dhalaalka dibnaha
Hore: Pigment Label -ka Gaarka ah Samee Lipgloss Vendor Lip Gloss
Xiga: Jumlada Oem Calaamadda Gaarka ah ee Si Degdegga ah u Qallajisa Nidaamka Boodh-Qubka
alaab -qeybiye dhalaalaya astaanta caadada ah
soo -saaraha dhalaalka dibnaha
gloss bushimaha iibiya jumlada
lipstick -ka matte -ka ah ee aan biyaha biyuhu lahayn
Pigment Label Gaarka ah Samee Lipgloss Vendor Lip G ...
Kordhinta Indhaha, dibinta, Jeexa indhaha, jeedal mink, indho -dejiye, Iibiyeyaasha Indhaha,